Fihaonana Miaraka Amin’ny Global Voices! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2013 2:23 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, বাংলা, Português, Español, Français, македонски, Italiano, English
Mety mahatsapa ianao fa efa mpinamana hatry ny ela ireo mpikambana ato amin'ny GV rehefa avy mpamaky mahafatra-po ireo lahatsoratra sy dikanteny mampisongadina ny resadresaka antserasera ao amin'ny fireneny avy. Angamba mety manaraka azy ireo ao amin'ny Twitter koa ianao na koa efa zatra ireo tetikasa sy hetsika nomerika. Eny, mametraka an'izao tontolo izao ho tsapa toa tahaka ny toerana kely izany sehatra virtoaly izany, saingy mbola misy singa lehibe eo amin'ny fifandraisana ivelan'ny aterineto manamafy izany fifandraisana an-tserasera izany.
Mandritra ny volana Novambra sy Desambra, mikarakara “fihaonana” enina mivantana izahay izay tantanina sy entanin'ireo mpikambana ao amin'ny de Global Voices, monina sy mahafantatra ny fiarahamonina ao an-toerana.
Na dia izany aza, mbola zava-dehibe kokoa noho ny hetsika amin'ny tambajotra sosialy izany fihaonana izany. Afaka mizara fahalalana, fanamafisana fahaizana, sy fiaraha-miasa eo amin'ireo olona manana andraikitra sahanina mitovitovy.
Angamba mety manan-kevitra momba ny tetikasa fanentanana ireo fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ianao ary te-hahazo mpanohana azo antenaina. Na mety te-hianatra tetikady vaovao momba ny fitantarana ara-nomerika hoan'ny mpihaino maneran-tany. Afaka mianatra bebe kokoa momba ny andraikitry ny Global Voices ianao sy ny fomba hahatongavana ho mpilatsaka an-tsitrapo. Mety ho anisan'ny fandaharan'asa tapakandro izany sy ny sisa maro hafa.
Ireo tanàna enina amin'ity fihaonana andininy voalohany ity dia:
Karachi, Pakistana – 1 Novambra 2013
Cairo, Ejypta – 16 Novambra 2013
Kampala, Oganda – 16 Novambra 2013
Skopje, Masedonia – 30 Novambra 2013
Porto, Portiogaly – 14 Desambra 2013
Phonm Penh, Kambodjia – Mbola ho ambara
Maimai-poana ny fanatrehana ny fihaonana, saingy ilaina ny mampilaza mialoha. Isaky ny fihaonana, hamoaka lahatsoratra izahay, ary misy koa hetsika ao amin'ny Facebook izay ahitana vaovao mikasika ny fomba fisoratana anarana sy ny fandaharana haroso. Havaozina miaraka amin'izany vaovao izany ihany koa ny lahatsoratra. Misy ny fanasana manokana halefa any amin'ireo kandidà efa fantatra mialoha avy ao amin'ny fifaninanana vatsy madinika Rising Voices, izay maro amin'izy ireo no avy amin'ireo firenena ireo.
Namoaka teny ifankafantarana – #GVMeetup ihany koa izahay ka azo arahina na dia tsy atao ao amin'ny firenenao aza ny fihaonana.
Anisan'ny tetikasa fitaratra ireto fihaonana enina ireto mba hanaovana fikarohana fa afaka manampy amin'ny fanamoràna ny fifampianarana sy fifanakalozana eo amin'ireo mpamaky sy olon-kafa ary fikambanana eo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra ny fikambanantsika midadasika Global Voices manerana ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao. Manantena fahombiazana amin'ity tetikasa ity izahay mba hanaovana fihaonana maro hafa amin'ny taona 2014!
Mandritra izany, raha te hahafantatra vaovao fanampiny, manorata any amin'ny rising [at] globalvoicesonline [dot] org